17 Apr, 2019 - 13:04	 2019-04-17T19:03:10+00:00 2019-04-17T13:00:05+00:00 0 Views
MAKADII veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 41, ndotsvagawo murume anoda zvekuchengetana ane makore 45 kusvika 55. Nhare dzangu 0775 272 270.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 36, ndinorarama ndiri pamushonga uye ndinotambira zvandiri. Mwana ndine 1, ndiri kuda murume ari pamushonga anotambira zvaari. Ndoda asinganyare zvaari kuchengetedza hutano. Anondida ane makore 40 zvichikwira ngaandibate pa0715 088 193.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 23 okuberekwa nemwana 1, ndotsvagawo murume ari pachokwadi asiri pamushonga seni. Ngaave akanaka, anoshanda uye anotya Musiki. Ndinoda akasununguka, ane makore 25 – 30. Ave ane mwana 1 kana asina, ndibatei pa0774 277 875.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane mwana mumwe chete, ndotsvagawo murume ari serious nekuroora asina chirwere. Ndinoda ane makore 24 – 26 ane mwana wakewo. Nhare yangu 0784 868 169.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 29 nemwana 1, ndotsvagawo murume ane makore 34 kusvika 45. Ndobatika pa0783 966 140, ngaave anoenda kuchechi.
Makadii veKwayedza? Ndine makore 42 nevana 2, handina chirwere uye ndinodawo mukadzi ari pachokwadi ane makore 38 zvichidzika. Nhare yangu 0774 726 256.
Makadini veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 20, ndinotsvaga mukomana kana murume ave kuda zvekuwana. Nhamba dzenhare idzo 0771 676 954.
Vose vanondifonera pa0771 928 600 chiregai ndakawana wandaida.
Ndiri murume ane makore 47 nevana vatatu, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 40 zvichidzika. Andifarira ngaandibate pa0773 897 221.
Makadiiko veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 45 nemwana 1 uye ndiri HIV negative. Ndinotsvakawo murume wekuroorana naye ane makore 50 zvichikwira. Nhare yangu 0774 856 666.
Makadini? Ndishambadzewo, ndiri madzibaba ane makore 48 ndowanikwa muHarare uye vana vakura. Ndotsvagawo mudzimai akarongeka anoda zvemba, akavimbika ada ndibate titaurirane pa0785 368 815.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinodawo musikana wekuroora anogara muHarare. Andifarira nhamba dzangu 0737 721 882.
Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvaga musikana ane makore 23 zvichidzika. Ndogara kuGuruve uye ndinobatika panhamba idzi 0779 283 471.
Tishamwaridwane, ndine makore 39 uye ndinodawo mukadzi wekuroora anotya musiki. Ada ngaafone pa0714 927 804 asi zvekutamba kwete.
Ndodawo musikana ane makore 18 – 29 asina mwana, handina kumboroora. Ndine makore 34, ndinoda anoenda kuchechi. Nhamba dzangu 0718 502 810 asi vaera Moyo kwete. Ngaave anoda kugara kumusha kumaruwa, anotya Mwari uye akakurira kumusha.
Ndiri mukadzi ane makore 31, ndinotsvagawo shamwari yechirume ane makore 35 zvichikwira ari pachokwadi. Nhare yangu 0784 709 137.
Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvakawo musikana wekuroora. Ndoda mupfupi ane makore 19 kusvika pa 23 ari 101% HIV negative. Nhamba dzangu 0719 392 055.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 40, ndotsvagawo murume ane makore 41 zvichikwira. Ndiri mucross-border. Ndobatika panharembozha idzi 0775 220 261.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 38, ndotsvagawo murume anoda zvokuroora ari pachokwadi. Handisi pamushonga, ndodawo ane makore 45 kusvika 60. Andifarira andibate panhamba dzangu. 0714 464 578.
Makadii veTishamwaridzane? Ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 35 kusvika 45. Ndine makore 32 nevana 4 uye ndiri HIV positive. Andida anondibata pa0783 801 608.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvaga musikana wekuroora mutsvuku akanaka asiri pamushonga. Ndinobatika panhare dzinoti 0779 046 769.
Ndiri mudzimai ane makore 35 nemwana mumwe chete uye ndiri pamushonga. Ndinotsvagawo murume, andifarira ndibate pa0774 105 568.
Ndiri mukadzi ane makore 39 nevana 2, ndinotsvagawo murume wekuvaka naye imba. Ndinoda ari pachokwadi nekuvaka imba asi matsotsi kwete. Ndinoda murume anogeza, andifarira ndibate pa0782 914 633.
Ini ndiri mukomana ane makore 29, ndiri mushava asi ndinoda mukadzi ari pamushonga. Kana aripo ngaandibate pa0714 871 360.
Ndiri kudawo mukadzi wekuwana, ndine makore 32 nemwana 1. Handisi pamushonga, andidawo totaura apo 0774 792 487. Ndatenda.
Makadii veKwayedza? Makaita basa, munhu wandaida ndakamuwana. Vanga vachifona pa0775 229 993 ngavachiregera.
Ndiri murume ane makore 40 ndotsvagawo mukadzi ane rudo asina chirwere ane chero api makore. Chero asingabereki ndomuda. Ini handishande parizvino. Andifarira ndibate pa0773 278 946
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 30 nevana vaviri, ndotsvakawo murume ane makore ari pamusoro peangu ane vana 2 kana 3. Ngaave ari pachokwadi ari kuda zvekuroora asiri pamushonga. Andifarira ngaandibate pa0778 127 492.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvagawo musikana ane makore 19 – 23 akanaka ari serious nekuroorwa. Anoda nezvangu anondibata pa0782 198 727.
Makadii henyu veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 40 nevana 4. Ndinoshanda mumba uye ndiri HIV negative. Ndinotsvagawo murume ane makore 45 kusvika 60 anoshanda basa riri nani pane rangu. Ava kudawo zvekuita imba ari pachokwadi. Ngaave anoda vana vangu uye anondipawo rudo rwakakwana, asingazondishungurudzewo. Zvizhinji tinozoraura. Andifarira ndinobatika pa0714 399 134. Ndatenda.
Vose vaifona pa0773 645 908 chiregai, ndakamuwana wandaida. Ndotenda Kwayedza.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 35, ndinodawo mudzimai ane makore 20 – 34 akazvipira kuvaka imba. Andifarira ngaandibate pa0785 518 759, ndiri muHarare.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 46 ekuberekwa ndichigara muno muHarare. Ndine vana 2 vakomana. Ndiri kutsvagawo mudzimai akanaka mutsvuku wekuvaka naye imba. Mudzimai uyu ngaave ari pasi pemakore 40 nevana vari pasi pe2. Ini ndiri Negative. Vasikana vanoshanda mumba kwete, bodo. Andifarira ngaandibate pa0774 068 844.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 36 nevana vaviri. Ndinoshanda muHurumende pedyo neHarare. Ndotsvaga murume anoda kuroora asina chirwere. Nhamba dzangu 0774 883 787.
Vese vaifona nevachiri kufona pa0779 415 820 ndinoti ndakamuwana wandaida chiregai kufona zvenyu. Ndatenda nekunzwisisa kwenyu.
Ndiri murume ane makore 35, ndoda musikana wekuroora ane makore 24 – 30 anoshanda, ini ndinoshanda. Ngaave ane mwana kana asina, ini ndinaye. Nhare yangu 0773 419 433.
Ini ndakambonyorera ndikamuwana asi tava nemwedzi 3 ndokuteverwa nemurume wake. Akange asina kundiudza kuti mudzimai wemunhu zvinove zvinhu zvisina kunaka chose. Ndine makore 48, HIV negative uye ndoda mukadzi ane makore 36 zvichidzika asina murume, ndapota hangu. Nhare yangu 0774 443 695.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 29. Ndotsvagawo musikana wekuroora ane makore 20 kusvika pa25, asina chirwere uye anonamata. Zvakawanda tozotaura, andifarira nhamba dzangu 0782 932 687.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 30 ndotsvagawo musikana ane makore 20 – 29. Ndinoita zvekuvaka, nhare yangu 0786 298 184.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 29 ekuberekwa, ndine mwana wangu mumwe chete. Ndinotsvagawo mukadzi akazvipira uye ane rudo asi matsotsi kwete. Ndinoda ane makore 20 kusvika 28. Ngaave anonamata, anotya Mwari uye ane mwana vake. Vakadzi vevanhu kwete, nhare yangu 0775 711 703.
Makadii? Ndiri murume ane makore 31, ndotsvaka mukadzi wekumisa musha naye. Nhare yangu 0783 421 019.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 33 nevana 2 uye ndiri pamushonga. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora. Anenge andifarira nhare dzangu 0777 021 672.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 39, ndiri positive uye ndodawo murume ari positive. Anoda nezvangu ngaandibate pa0783 724 238.
Makadii vechirongwa? Ndiri murume ane makore 38, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 25 kusvika 34 ane mwana mumwe chete. Ngaandibate pa0776 193 153.
Makadii zvenyu? Ndiri mukomana ane makore 27, ndotsvagawo musikana wekuroora ane makore 20 zvichidzika. Ndogara maMutare, handidi wekure ndapota. Nhare yangu 0714 158 373.
Ndiri murume ane makore 47 nevana vatatu, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 40 zvichidzika. Andifarira ngaandibate pa0738 394 500.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 30 ndotsvakawo mukadzi wekuroora anoda zvemba. Anoda anofona pa0714 674 589.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 19 ndotsvagawo mukomana ane makore 23 – 25 ave kuda kuroora. Andida ngaandibate pa0771 826 662.
Makadii henyu? Ini ndiri mukomana ane makore 23 ekuberekwa ndotsvagawo musikana wekupinda murudo naye ane makore 18 kusvika 21. Ndinoda anotya Mwari, mupfupi mutema uye munaku. Andifarira ngaandibate pa0778 031 242.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 39 nevana vaviri, HIV positive uye ndotsvagawo murume ane makore 40 kusvika 45 anoshanda achidawo zvekuroora. Ndinoda ari pachokwadi nekuti ndaneta nekusangana nematsotsi. Ndoshanda mumba, nhare yangu 0777 170 541.
Nhamba idzi 0714 809 632 musadzishambadze, ndave muwanano.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 19, ndinotsvakawo musikana ane makore 18 asingarwari seni. Nhare yangu 0779 457 590.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 39 nevana 4, ndiri muHarare uye ndodawo murume anoshanda ane makore 44 – 50. Ari negative andifarira ngaandibate pa0778 159 763.
Ndiri mukadzi ane makore 49, ndotsvagawo murume ane makore 49 zvichikwira asi vane vakadzi kwete. Zvakawanda totaura, andifarira ndibate pa0771 010 746.
Makadii zvenyu? Ndiri mukomana ane makore 27, paupenyu ndiri driver ndinoshandira muHarare. Ndinotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 23 asina mwana uye asina HIV. Ndobatika pa0714 248 355.